Litorjia - Wikipedia
Ny litorjia na litorijia na litorzia na litorizy dia ny fitambaran' ny fombafombam-pivavahana sy ny lanonana ary ny vavaka atokana ho amin' ny fanompoam-pivavahana amin' ny andriamanitra iray na maro, izay mety ho voafaritry ny fitsipika ao amin' ny soratra masina na ny lovantsofina. Ny teny hoe litorjia dia matetika ampiharina amin' ny fivavahana kristiana hanondroana ny fanompoam-pivavahana azon' ny sarambaben' ny mpino atrehina sady naorin' ny Fiangonana iray ara-dalàna.
1 Ny litorjia teo amin' ny Grika sy ny Romana
1.1 Fiavian' ny teny hoe litorjia
1.2 Ny leitourgia: fanompoana miendrika hetra
2 Ny litorjian' ny fivavahana egipitiana tamin' ny Andro Taloha
3 Ny litorjia ao amin' ny jodaisma
4 Ny litorjia ao amin' ny kristianisma
5 Ny litorjia ao amin' ny finoana silamo
6 Ny litorjia ao amin'ny vivavahana bodista
Ny litorjia teo amin' ny Grika sy ny RomanaHanova
Fiavian' ny teny hoe litorjiaHanova
Ny teny hoe litorjia (misy koa ny manoratra sy manonona hoe litorzy) dia avy amin' ny teny grika hoe λειτουργία / leitourgía na λῃτουργία / lêitourgía izay avy amin' ny fitambaran' ny teny mpamari-toetra hoe λειτος / leitos (izay midika hoe "momba ny vahoaka" sady avy amin' ny teny hoe λεώς / leôs na λαός / laos izay midika hoe "vahoaka") sy ny hoe ἐργον / ergon (izay midika hoe "asa"). Ara-bakiteny dia midika hoe "asam-bahoaka", izany hoe asa ho an' ny vahoaka, fanompoana ny vahoaka, fanompoana ho an' ny tanàna na ny fanjakana.
Ny leitourgia: fanompoana miendrika hetraHanova
Andohalambon'i Germanicus, naorina tamin'ny taona 19 taor. J.K. ao Saintes (kaominina ao avaratr'i Frantsa) noho ny fanomezana nataon'i Caius Julius Rufus, olobe romana avy any Galia.
Noho io leitourgia io dia nizaka ny vesatra ara-bola ny mpanan-karena izay novalian-tsoa amin' ny alalan' ny fampakaram-boninahitra sy ny tombontsoa manokana. Tamin' ny taonjato faha-3 taor. J.K. dia nanjary tsy maintsy atao ny leitourgia tao amin' ny Fanjakana sy ny Empira romana. Ny fanatanterahana izany fanompoana izany dia nanamafy ny lazan' ny mpanohana ny manan-talenta. Isan' ny leitourgia koa ny fanaovana fombafomba hanomezam-boninahitra ny zava-mitranga iray. Ny tena nahitana ny leitourgia dia tamin' ny fivavahana, ka tao amin' ireo firavoravoana ampahi-bemaso no tena nisehoany. Teo amin' ny Empira romana dia lasa vesatra ho an' ny olona ny leitourgia izay natao amin' ny teny latina hoe munera, (avy amin' io, ohatra, ny teny frantsay hoe rémunération "karama") ka maro ireo niezaka ny tsy ho tratran' izany araka izay azo atao. Izany munera izany dia nahitana karazam-pandaniana mifandray amin' ny fanorenana sy ny fanisiana fanaka amin' ny tanan-dehibe. Isan' izany koa ny zavatra tsy maintsy natao ho an' ny Empira toy ny fanarenana ny arabe sy ny tetezana ary ny fantson-drano lehibe. Tao koa ny fanomezana akora fanodina sy ny fandrahoana ny sakafo ho an' ny tafika mandalo.
Ny litorjian' ny fivavahana egipitiana tamin' ny Andro TalohaHanova
Ny fomban' ny fivavahana tao Egipta tamin' ny Andro Taloha (taonarivo faha-4 tal. J.K. hatramin' ny taonjato faha-4 taor. J.K.) dia niorina amin' ny fankalazana ny firindran' izao tontolo izao (atao hoe maât) hatramin' ny namoronan' ireo andriananitra egiptiana azy. Tamin' ny voalohany izany fankalazana izany dia nosahanin' ny farao (na faraona) nefa taty aoriana dia ny mpitondra fivavahana no nanjary niandraikitra izany. Ny vahoaka, amin' ny alalan' ny fombafomba fanao isan' andro sy ny lanonana mahazatra dia manana adidy ny handray anjara amin' izany fanompoam-pivavahana izany. Ny litorjia egiptiana dia ahitana lanonana karakaraina amin' ny fotoana manan-danja indrindra amin'ny fiainan'olombelona (toy ny fahaterahana sy ny fahafatesana ary ny hafa koa) sy amin' ny fankalazana ny fitsaohana ireo andriamanitra (firavoravoana ho an' i Nily na Neily). Ny sasany amin' ireo fombafomba ireo dia mbola hita amin' ny fombam-pivavahan' ny Kristiana kôpta (fr.: Coptes).
Ny litorjia ao amin' ny jodaismaHanova
Jiosy mivavaka eo amin'ny rindrina andrefana ao Jerosalema
Tao amin' ny jodaisma misy fisoronana, araka ny hita ao amin' ny Septoajinta (Baiboly jiosy amin' ny teny grika) sy ao amin' ny Testamenta Vaovao, dia iantsoana ny fanompoana atao ao amin' ny Tempoly ny hoe leitourgia. Mifandray amin' ny fanompoam-pivavahana amin' Andriamanitra tsy hita maso sy amin' ny vavaka atao aminy izany. Teo amin' ny jodaisma rabinika kosa, rehefa rava ny Tempoly faharoa sy ny tabernakely, ka very ny tetiaran' ny Levita, dia nanjavona ny mpisorona sy ny asam-pisoronana ary ny zavatra rehetra momba ny masina.
Ny litorjia jiosy dia ny famakiana na famerenana ny vavaka izay endriky ny fitandremana ao amin' ny jodaisma rabinika. Ireo vavaka ireo, izay matetika ahitana toromarika sy fivoasana, dia hita ao amin' ilay atao hoe סדור / siddur (raha milaza maro: סדורים / siddurim) (boky mirakitra ireo vavaka mahazatra ao amin' ny fivavahana jiosy). Amin' ny ankapobeny, ny lehilahy jiosy dia tsy maintsy manatanteraka vavaka intelo isan' andro ka misy fotoana voafaritra izany izay atao amin' ny teny hebreo hoe זְמַנִּים/ zmanim. Araka ny Talmoda (hebreo: תַּלְמוּד / Talmūd) dia asaina mivavaka indray mandeha isan' andro fotsiny ny vehivavy jiosy.
Ireto ny vavaka izay tsy maintsy atao isan' andro:
ny Shakharit na Shaharit (שַחֲרִת), avy amin' ny teny hebreo hoe shakhar na shahar (שַחָר) "hazavan' ny maraina";
ny Minkha na Minha (מִנְחָה), vavaka atao amin' ny tolakandro ho an' ny fanaovam-panatitra koba miaraka amin' ny sorona tanterahina ao amin' ny Tempoly;
ny Arvit (עַרְבִית) na Maariv (מַעֲרִיב), atao amin' ny fanombohan' ny alina.
Misy koa vavaka fanampiny:
ny Musaf (מוּסָף, "fanampiny") dia tanterahin' ireo jiosy ortodoksa sy ireo jiosy mpitahiry ny rakitry ny ela amin' ny andron' ny Sabata, andro lehibe masina eo amin' ny jodaisma (izay mahafaoka koa ny Khol HaMoed), ary ny Rosh Khodesh ("lohan' ny volana").
ao koa ny fanompoam-bavaka fahadimy atao hoe Ne'ila (נְעִילָה, "famaranana"), izay tanterahina amin' ny Yom Kippur (יוֹם כִּיפּוּר "andro fifonana").
Ny litorjia ao amin' ny kristianismaHanova
Pretra mankalaza ny Litorjian'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana katolika tatsinanana any Prešov, ao Slovakia.
Tsy ny fiangonana kristiana rehetra no misy litorjia fa ao ireo manana ary ao ireo tsy manana izany. Ireo manana litorjia dia manaraka toromarika mazava voasoratra ao amin' ny boky natokana ho an' izany. Ireo tsy manana kosa dia manao fotoam-pivavahana manaraka fandaharam-potoana malaladalaka na tora-po mihitsy aza.
Ny teny hoe litorjia ao amin' ny kristianisma dia ilazana ny fandaharam-potoana hajaina mandritra ny fanompoam-pivavahana. Ao amin' ny Fiangonana katolika, ny litorjia dia ny fandraisan' anjaran' ny vahoaka ao amin' ny asan'Andriamanitra, dia ny asam-pamonjena nataon' i Jesoa Kristy izany. Manohy ny asam-panavotana ao amin' ny litorjia i Kristy.
Nampiasa ny teny hoe leitourgia ny Kristiana voalohany hilazany ny asa fanompoana lehibe, dia ny fanompoana amin' ny Alahady. Izany asa fanompoana izany, izay atao hoe litorjia na ministera dia adidin' ny Kristiana amin' ny maha mpino azy amin' ny alalan' ny batisa (na batemy) ao amin' i Kristy sy ny fandraisana anjara amin' ny asa fanompoana ataon' i Kristy. Ny litorjia dia asa fanompoana mifamaly. Maro ny fiangonana kristiana izay manendry olona amin' ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana, atao hoe litorjista. Ny litorjista dia mety hamaky fanambaràna na hamaky ny Soratra Masina sady miantso ny mpino hanatanteraka ny fivavahana, fa ny "ministra" (pastora, pretra, sns) kosa dia miandraikitra ny toriteny, manolotra vavaka, ary manamasina ny sakramenta. Ny litorjista dia mety ho ministra voahosotra na vita fanamasinana na loholona tsotra (izay atao hoe koa laika na lahîka). Ny fiangonana manontolo dia mandray anjara sady manolotra ny litorjia ho an' Andriamanitra.
Ny litorjia ao amin' ny finoana silamoHanova
Miozolmana mivavaka manondrika ny loha sy ny lamosina amin'ny maraina ao amin'ny Moske Lehiben'i Nishapur any amin'ny tapany avaratra-atsinanan'i Iràna.
Ao amin' ny finoana silamo, ny teny hoe salāt (izay midika hoe "vavaka", avy amin' ny teny arabo hoe صلاة‎ / ṣalāh na صلوات / ṣalawāt raha milaza maro) dia fomba fivavahana arahim-pihetsika ara-batana tsy maintsy atao, ka mifanohitra amin' ny atao hoe dua (arabo: دُعَاء / duʿāʾ) izay midika hoe "fitalahoana". Ny maha zava-dehibe azy eo amin' ny Miozolmana dia ambaran' ny maha isan'ireo Andry dimin' ny finoana silamo azy.
Ialohavan' ny fidiovana (arabo: الوضوء / 'al-wuḍū) sady tanterahina indimy isan' andro izany. Averimberina ny andian-teny atao rakʿah (arabo: ركعة) na rakaʿāt (arabo:ركعات, raha milaza maro) raha anaovana asa (fihetsika) sy lahateny tsy maintsy tanterahina. Ny isan' ny rakaʿāt tsy maintsy atao dia mety ho roa hatramin' ny efatra arakaraka ny fotoana ao amin' ny andro na ny toe-javatra hafa (toy ny fivavahana amin' ny andro Zoma izay anaovana rakaʿāt roa).
Ny litorjia ao amin'ny vivavahana bodistaHanova
Bhikkhu (monka na moanina bodista) eo am-pivavanana ao Tailandy.
Ny litorjia bodista dia fanompoana voafaritra tsara ho enti-mitsaoka sy mivavaka izay tanterahin'ny fikambanana bodista (sangha bodista) ao amin'ny sampan'io karazam-pivavahana io. Tanterahina indray mandeha na imbetsaka isan'andro izany ary misy fiovaovana eo amin'ireo sampana Teravada sy Mahaiana ary Vajraiana.
Ny litorjia amin'ny ankapobeny dia ahitana hira na fanononana sutra iray na andalana vitsy avy amin'ny sutra na mantra (indrindra ao amin'ny Vajraiana), sy ao amin'ny gatha isankarazany. Arakaraka ny fanao izay tian'ny mpanatanteraka izany hatao, dia azo atao ao an-tempoly izany na any an-trano. Ny litorjia dia tanterahina saika mandrakariva eo anatrehan'ny zavatra ivavahana sady arahina fanatitra jiro sy emboka sy rano ary sakafo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Litorjia&oldid=1001116"
Dernière modification le 4 Febroary 2021, à 04:38
Voaova farany tamin'ny 4 Febroary 2021 amin'ny 04:38 ity pejy ity.